Radio Don Bosco - Lehilahy marina sy vadin'i Maria Virjiny
Lehilahy marina sy vadin'i Maria Virjiny
Naseho ny : 2 marsa 2021
Modely ho antsika rehetra i Masindahy Josefa amin'ny fahamarinany sy ny fahanginany. Lehilahy marina izy noho izy tsy nivadika tamin'i Maria. Tsy hay tohaina ny fitiavany an'i Maria. Tsy te hanala baraka ny vadiny izy ary noraisiny tsy am-pisalasalana ny iraka nankininan'Andriamanitra taminy. Mampianatra antsika hiaina ny fahanginana izy mba hahafahantsika mandinika ny hevitry ny fiainantsika amin'izao tontolo feno tabataba izao. Fandaharana momba an'i Md Josefa, iarahana amin'i P Rakotondramanana Soloniaina Jean Emilien, Recteur du Petit Seminaire, Ambohipo, Antananarivo.